Ukutyelela iitempile zeAngkor eCambodia | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukutyelela iitempile zaseAngkor eCambodia
UAlberto Legs | | abanye
Xa sicinga mpuma AsiaEnye yeendawo zokuqala eziza engqondweni, ngaphandle kwamathandabuzo, ubunzima obenziwe ziitempile zaseAngkor eCambodia. Esona sakhiwo sikhulu senkolo ehlabathini Yindawo yenkcubeko kunye nobugqwirha ekukhohlisayo kangangeminyaka bonke abatyeleli abashiywa sisigantsontso seCambodian okanye ilizwe elikufutshane laseVietnam elilungele ukwenza ulwandiso. Ngaba uza nathi ukwazi i Iitempile zaseAngkor eCambodia?
1 Imbali emfutshane yeetempile zaseAngkor
2 Ukutyelela iitempile zaseAngkor
3 Ulwazi malunga nokutyelela iitempile zaseAngkor
Imbali emfutshane yeetempile zaseAngkor
KwiCambodia yanamhlanje kukho ummandla owawusele uneminyaka engama-2 XNUMX eyadlulayo unabantu beentlanga ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, bekungayi kuba kude kube ngenkulungwane ye-XNUMX yeXesha Eliqhelekileyo xa Kumkani Jayavarman II, inkokheli ephezulu yobukhosi baseKhmer, yayijongene nokukhulula bonke abantu bendawo ukudala ubukumkani obubizwa ngokuba Devaraja (okanye uthixo. itempile), ode kunqulo lokumkani ngokwakhe.
UJayavarman II waqala ngokwakha Preah Ko itempile, yakhelwe ukuhlonipha ukumkani. Kwiminyaka kamva, uJavayarman I wayezakuphatha ukudala itempile Bakong, eyayiza kuba ngumzobo ogqibeleleyo wobugcisa obunxitywa ziitempile zaseAngkor okwangoku, elinegugu elikhulu, iAngkor Wat exabisekileyo, eyalelwa ukuba yakhiwe nguKumkani Yasovarman ngenkulungwane ye-XNUMX. Ixesha elingqinelane ne impembelelo yobuBuddha nobuHinduIinkolo ezandisiweyo, ubukhulu becala, ngabarhwebi baseIndiya ababesebenzisa iAngkor njengendawo yokuhamba nokuphumla kude kube sekupheleni kwexesha lemvula.
Nangona ixesha lobukhazikhazi beetempile zaseAngkor lahlala phakathi kwenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX, uhlaselo oluqhubekayo lwamaMongol asemantla kunye namaSiamese asemazantsi akhokelela shiya iitempile ngo-1594, I-Siem Riep ukuba yintloko-dolophu yaseCambodia kamva. Ukuqiniseka okungazange kuqinisekiswe, kuba iitempile zashiywa zenzelwa ihlathi ngaphandle kokuba zoyiswe ngamaSiam de, kwiinkulungwane kamva, isazi sendalo esingumFrentshi safumanisa eli "hlabathi lilahlekileyo" ngexesha lotyelelo lokukhangela amabhabhathane.
Ngaphezulu kwe Kubaliwe izikhumbuzo ezingama-900, i Iitempile ze-angkor Bahlala belahliwe kangangeenkulungwane, bengoo-Angkor Wat kuphela kwabo baqhubeka nokugcinwa kwaye behlala iimonki zamaBhuda kule ndawo unanamhla.
Kucingelwa ukuba sesona sakhiwo sikhulu samaHindu emhlabeni kwaye sikhulu I-icon yelizwe laseCambodia, I-Angkor complex yonyulwa Indawo yeLifa leMveli ye-UNESCO ngo-1992. Ubuncwane bokwakha obuye baba yenye yezona zinto zinomtsalane kulo naliphi na ulonwabo e-Southeast Asia kwaye ngakumbi kwilizwe laseCambodia elijikeleza le ndawo yeetempile zoyiswe yi-ficus, oothixokazi abancumayo kunye nezinye ukutshona kwelanga okuhle kakhulu emhlabeni.
Ngaba ungathanda ukuphanda ngobuhle beetempile zaseAngkor?
Ukutyelela iitempile zaseAngkor
Isakhiwo se-Angkor sesinye sezona zikhulu ehlabathini, yiyo loo nto utyelelo luza kuhlala luxhomekeke kwixesha ekufuneka utyelele kulo mmandla wonke. Ukuba kwimeko yakho ufuna ukungxama kusasa okanye usuku ukutyelela eyona ndawo imelweyo, zezi ezona ndawo zibalulekileyo eAngkor ongenakukuphosa:
Eyona tempile ibaluleke kakhulu neyona ifotwe kakhulu eAngkor Iphumle kwingingqi esembindini, ebekwe nje kwiikhilomitha ezingama-5.5 kumantla eSiemp Reip, isixeko esifanelekileyo sokusebenzisa njengesiseko sokwazi lo mmandla. Iphefumlelwe yintsomi yeNtaba iMeru yeTibet kunye yakhiwe ngembeko yothixo wamaHindu uVishnu, IAngkor (ikomkhulu lesiSanskrit) Wat (itempile ngolwimi olunye) wasweleka eNtshona ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, esiba sisiqwengana sesifundo seFrench School yeFar East, ephethe uhlalutyo nokwakhiwa ngokutsha Izikhumbuzo zaseAsia ze-Indochina ezihlaselwe ngamaFrentshi. Indawo enomdla eyenziwe ziinqaba ezintathu ezidumileyo ezimema ukuba ulahleke phakathi kweepaseji ezikhuselwe ziimonki zamaBuddha, iigalari zangaphandle ezihlaselwe lihlathi okanye ukutshona kwelanga okufumana enye yeendawo ezilungileyo emhlabeni.
Ithathwa njenge isixeko esidala sasebukhosini esinqatyisiweyoI-Angkor Thom yenye yeendawo ezinkulu ngaphakathi kweAngkor ngokwayo kunye nokongezwa ukuya kuthi ga Iimitha zesikwere ezingama-9. Indawo efanelekileyo yokonwabela iingonyama ezinqamleza ukungena kwePhimeanakas, iTerrace engaqhelekanga yeNdlovu kodwa, ngakumbi, iBayon, indawo yetempile edume ngayo Iitayile ezi-54, phakathi kwayo kubonakala enye apho uBuddha avela khona kumacala omane, okanye ngakumbi phezulu Imifanekiso eqingqiweyo engama-200 encumisayo ezitsaliwe ziimbombo zayo.
Yaziwa njenge Itempile yeeMvelaphi, ITa Prohm igqibezela ubathathu emnye waseAngkor, ikwayenye yezona ndawo zifotwe kakhulu kule ndawo. Isizathu asiyonto yimbi ngaphandle kwemeko yayo yetempile eshiywe embindini wehlathi, ekhokelele kubuchwephesha besikolo saseFrance ukuba basigcine sikwisimo esinye abasifumene kuso. Oku kukhokelela kubukho be imikhiwane emikhulu ibaleka kwezinye iitempile ukwenza ukhenketho olunomdla.
Ukuba unexesha elininzi lokundwendwela itempile, ungakhetha i Indlela ebandakanya u-Preah Khan, i-Neal Pean, edume ngeenyoka zayo eziqingqiweyo, okanye iTempile yaBasetyhini, ekwabizwa ngokuba yi-Banteasy Srei, kude kude ne-Central Angkor.
Ulwazi malunga nokutyelela iitempile zaseAngkor
Ixesha leAngkor Ilawulwa kukudlula kwelanga, ke iitempile zivula ngo-5 kusasa zize zivale ngo-17: 00 emva kwemini. Ishedyuli evumela undwendwe ukuba ihambe okokuqala ekuseni ukusuka kwisixeko esikufutshane sase-Ri Riep kwaye sonwabele ukuba wedwa kwesixekethile ukudibanisa nokuphuma kwelanga. Ngaphandle koko, ukutshona kwelanga kuhlala lelona xesha linqwenelekayo lokuthatha umfanekiso.
Ingubo xa ungena e-Angkor kufuneka ishiye amagxa angenanto kunye namadolo, ke kuyacetyiswa ukuba uhambe ugqunywe kangangoko.
Ngokumalunga nexabiso lamatikiti, anokuthengwa kuxhomekeke kwixesha ofuna ukulonwabela iAngkor ngamaxabiso ahlukeneyo. Itikiti leentsuku ezi-1 libiza iidola ezingama-37, iintsuku ezi-2 nezili-3 ezingama-62 zeedola ngelixa eyona ibiza kakhulu, kwiveki enye, ifikelela kuma-72 eedola.
Eyona ndlela yokunandipha iitempile zaseAngkor kuxhomekeke kwimozulu.
Ngaba ungathanda ukufumanisa lo mmangaliso waseCambodia?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Ukutyelela iitempile zaseAngkor eCambodia
Yintoni ongayibona eSantillana del Mar
Yintoni ongayibona eSofia